Lingisa i-Android ku-Windows noma kwi-Mac | Izindaba zamagajethi
Guqula ikhompyutha yakho ibe yidivayisi ye-Android
Lokhu kungaba iphupho lenani elikhulu labantu abafuna ukujabulela, labaningi Izinhlelo ze-Android kwikhompyutha yakho, yiba lo nge-Windows noma i-Mac operating system; Yize kunamanje kunenqwaba yeziphakamiso zokulingisa uhlelo lwethu lokusebenza kukhompyutha ye-Android, le mishini ebonakalayo ivamise ukuba nemikhawulo ethile, engahlangabezani nesidingo sakho konke ukunambitheka.
Ngaphezu kwalokhu, imishini ebonakalayo elingisa ipulatifomu Android ngaphakathi kwekhompyutha yethu, zivame ukudinga inani elikhulu lezinsizakusebenza ukuze zisebenze; Ubufakazi balokhu ukuthi kufanele sithathe inani elikhulu le-RAM, ama-cores amaningi weprosesa yethu, isikhala sediski elinzima phakathi kwezinye izici ezimbalwa ezingeziwe. Kepha Kuthiwani ngokuguqula ikhompyutha yakho ibe yidivayisi ye-Android ukuze isebenze ngesikhathi sangempela?
1 Isicelo sesithathu se-PC ne-Mac sokulingisa i-Android
2 Imisebenzi ebaluleke kakhulu kule Android elingisiwe
Isicelo sesithathu se-PC ne-Mac sokulingisa i-Android
Yebo, uhlelo olulula ebesingalulanda ngalo mzuzu mahhala ngokuphelele kuvela esandleni sesayithi bluestacks.com, beka lapho kuzodingeka sikhethe ithuluzi lakho ukulifaka kukhompyutha yethu; Lapho unezinketho ezi-2, okuluhlaza okukodwa (kweWindows) nokunye okumpunga (kwamapulatifomu e-Mac)
Lapho ithuluzi selilandiwe, siyaqhubeka nokulifaka, inqubo ezothatha isikhathi kusukela ithuluzi lidinga izinsiza ezimbalwa ukuze zilandwe futhi zifakwe kusuka efwini lakho.
Inqubo ingathatha isikhathi esithile, edinga ukubekezela okuningi kuze kuphele ukusebenza kwayo ngakunye kwenqubo yokufaka.
Uhlelo lokusebenza luzosinikeza ithuba lokudala ukufinyelela okuqondile, ukufinyelela esitolo sohlelo lokusebenza phakathi kwezinye izindlela ezimbalwa.
Lapho ifakiwe ngokuphelele, ngokushesha izosebenza "isihenqo esigcwele" eqenjini lethu, lapho sizothokozela khona inani elikhulu lezicelo esizozijabulela futhi phakathi kwazo, imidlalo yevidiyo, okuyizintandokazi zabancane futhi esinganikeza ikhompyutha uma sizosebenza kuthebhulethi yethu Android.
Imisebenzi ebaluleke kakhulu kulokhu Android ukulingiswa
Este Android okulingisiwe (yilokho ebesifuna ukukuqamba) inguqulo ekhethekile yamaBlueStacks, ahlala anikela ngezibuyekezo ohlelweni lwawo lokusebenza; Esikrinini esikhulu sizobabaza izigaba ezimbalwa, konke ngesitayela sesitolo sohlelo lokusebenza.
Phezulu kunamathuluzi asetshenziswe kakhulu yiwo esisanda kuwasebenzisa; kukhona okukhona okukhuluma ngokuhlelwa kwesistimu, esingakusebenzisa ukubuyekeza amapharamitha ambalwa uma sifuna ukuwashintsha.
Isibonisi esisinikeza lokhu kulungiselelwa kufayela le- Android okulingisiwe, kuyinto icishe ifane nalokho ebesingakuthola kudivayisi ephathekayo enale ndlela yokusebenza efanayoNgakho-ke, kulula kakhulu ukuphatha ngayinye yalezi zinto uma sesivele sinolwazi ngamadivayisi wethu weselula.
Izinkinobho ezifana neKhaya, buyisela isenzo noma ukubuyekezwa kwezicelo ezisanda kuvulwa zethulwa yizithonjana zazo ezingezansi kwesobunxele.
Ngasohlangothini lwesokunene esikhundleni salokho, sizoba nemininingwane efana nesikhathi, ithuba lokwabelana ngohlobo oluthile lwesithombe noma uhlelo lokusebenza, isithonjana esincane shintshela kusikrini esigcwele uye efasiteleni elihlukile nesinye isithonjana esizosisiza ukuvala uhlelo.
Lesi sithonjana sokugcina esisishilo, sizolivala okwesikhashana ithuluzi, yize lifana izokwenziwa ngezinsizakusebenza ezingemuva ngemuva, okuthile esingakubona uma sibheka indawo yesaziso ngaphakathi kwetreyi yethu yomsebenzi, lapho singayikhetha khona futhi ukuze sisebenze futhi sibuyele emsebenzini Android ngaphakathi kweWindows noma iMac.
Njengoba singakubonga, lokhu kungenye indlela enhle yokusebenzisa lezi zinhlelo zokusebenza Android kwikhompyutha yomuntu siqu, ukulingisa okuthembisa ukuthi kuzosebenza kangcono njengoba kukhula, ngoba ukubuyekezwa kwamanje kusesigabeni se-beta njengoba kubikwe isiza sayo esisemthethweni. Uma unomdlalo ongafaki kukhompyutha yakho, ungakhohlwa ukuhlola ukuhambisana kwawo neziphakamiso zethu.
Imininingwane engaphezulu - Lo mdlalo uzosebenza kukhompyutha yami
Indlela ephelele ye-athikili: Izindaba zamagajethi » General » Software » Guqula ikhompyutha yakho ibe yidivayisi ye-Android
Faka i-Instagram kwiWindows noma kwi-Mac PC
Okokufundisa: Ungayithola kanjani imali eyengeziwe ngezithombe zikaKhisimusi